SOMALITALK - AQOON KORORSI
Haddaba, taariikhdu markay ahayd 1899, ayaa Wilbur Wright iyo walaalkiis Orville Wright waxay arkeen sida ay u duulaan shimbiraha loo yaqaanno “Birds of Prey”. Waxay u fiirsadeen sida ay shimbiruhu u duulaan oo ay baalashooda kolba si ugu dhigaan. Waxay ogaadeen in samaynta dayuurad hawada ku socota ay suurtagal noqon karto haddii la helo saddexdan arrimood: 1. Baalal ama garbo kor u qaada (wings to lift it), 2. quwad lagu dhaqaajiyo (power to move it through the air), 3. iyo aalad lugu hago inta ay hawada ku jirto (a device to control it during flight).
Kicitaankii koobaad ee dayaaraddaasi sameysay waxay qaadatay 12 ilbiriqsi (seconds), kii ugu dambeeyay ee ay isla maalintaas sameysayna waxay ku qaadatay 59 ilbiriqsi (seconds), waxayna socotay ilaa 852 fuud (foot). Sannadkii 1905-tii ayaa Wilbur Wright iyo walaalkiis Orville Wright waxay sameeyeen dayuurad farsamo ahaan isu-dhan oo leex-leexan karta. Diyaaraddaasi waxay hawada ku jirtay muddo dhan saacad barkeed ah (½ hour).